Dhallaanka iyo iibka tubaakada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallaanka iyo iibka tubaakada
La daabacay torsdag 11 mars 2010 kl 16.25
Waxaa sahlan in dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 18 jir sigaar iibsadaan ,dawladda ayaa rabta in ay adkeeyso sharciga tubaakada si ay u joojiso iibinta laga iibinayo da'yarta sidaas waxaa sheegey wasiirka dadka waaweeyn iyo caafimaadka dadweeynaha Maria Larsson (KD).
Sharcigaan la soo bandhigey ayaa la sheegey in looga joojinayo iibka tubaakada dukaankii jabiyo in uu tubaakadaas ka iibiyo qof da'diisu ka hooseeyso 18 jir,mas'uuliyad weeynina waxay saaran tahay kuwa iyagu leh dukaamada tubaakada iyo sigaarka gada.
IIbiska tubaakada ayaa lagu wargalin doonaa kumuunka ,tubaako iibiyayaasha ayeyna khasab ku tahay in ay warbixin siiyaan shaqaalaha si aysan tubaako uga iibin dhallaan da'doodu ka yar tahay 18 sano ,sidaas waxaa tiri Maria Larsson (KD) wasiirka dadka waaweeyn iyo caafimaadka dadweeynaha.
Si loo baaro xakameeynta shuruudaha iibka tubaakada ayaa kumuunada iyo waliba booliisku adkeeynayaan koontaroolkeeda.
Sida ay sheegtey wasiiraddu Maria Larsson boqolkiiba 47 waxaa dhallaanka da'da yar u suuragala in ay ku guuleeystaan iibsiga tubaakada.